Muran Ka Dhashay Mushaharka Dowladda Qadar Ku Qaadatay Dhalinyaro Soomaaliyeed Oo La Askareeyey
Sunday February 04, 2018 - 19:03:45 in Wararka by Super Admin
Doxa (Xogreebnews) –Warbixino hore oo ay daabaceen Wargeysyo ay ka mid tahay Wargeyska Almasar Al-yoom ee ka soo baxa magaalladda Qaahira ayaa baahiyey in dowladda Qadar ay ciidamo ka qoroneyso dalalka Bariga Afrika oo ay Soomaaliya ku jirto.
Ciidamadan ayaa la sheegay in ay ka qayb qaadan doonaan difaaca dalka Qadar haddii uu weerar kaga yimaado xulufada ay dowladda dalka Sacuudi carabiya hogaamineyso.
Dhaliyarada ay dowladda Qadar ka qoraneyso gudaha dalka Soomaaliya ayaa waxaa dilaaliin ka ah dad Soomaali ah oo ku nool gudaha dalka Qadar, kuwaasoo saami qaybsi beeleed u sameystay tirada dhalinyaradda dalka Soomaaliya laga keenayo, waxaana halkii qof ay ka qaataan lacag dhan 6 Kun oo Doolar, sidaasna waxaa Madal furan u sheegay nin dhalinyaro ah oo ka mid ah dadka dalkaas loo qaaday.
Dhinaca kale, Dowladda Qatar waxay qaadanaysaa dhallinyarada shaqo la’aanta ku hayso dalalka saboolka ee Geeska Afrika, oo ay Somalia ku jirto, iyadoo Askari kasta mushaar ahaan bishiiba loo siinayo 6,000 oo Dollarka Maraykanka.
Wargeys lagu magacaabo Almasar Al-yoom ayaaqoray bishii Oktoobar ee sanadkii la soo dhaafay in hawlgalkan ay qayb ka yihiin rag siyaasiyiin ah oo ka shaqeeya xarunta Madaxtooyadda Soomaaliya ee Villa Somalia, wuxuu kaloo Wargeysku qoray in ay qaar ka mid ah Maamulada Goboladda Soomaaliya ay ka bilaabatay qorshaha la doonayo in dhalinyaradda Soomaaliya lagu mataaneeyo ciidamada dalka Qadar.
Dhowrkii bilood ee la soo dhaafay ayaa waxaa magaalooyin dhowr ah oo ka mid ah Soomaaliya, sida S/land, P/land, Ju/land, Muqdisho iyo meelo kale waxaa ka socday diyaarinta dhalinyaradda loo qaadi lahaa xeryaha Milateriga ee dalka Qadar.
Nin dhalinyaro ah oo codsaday inaan magaciisa la sheegin ayaa Madal Furan u sheegay in uu dhowaan aadi doono dalka Qadar, kadib markii ay qoyskiisu bixyeen lacag 6 Kun oo doolar ah, wuxuu kaloo intaas ku daray in loo sheegay in si toos ah loo geyn doono xero Milateri oo ay uga horeeyaan dhalinyaro kale oo Soomaaliyeed.
Wuxuu ninkaasi sheegay in Sanadkiiba uu yeelan doono 3 bilood oo fasax ah oo uu qoyskiisa la soo joogi doono, haddii uusan dooneyna la sii doono lacag ka badan mushaharkiisa mudadda 3 bilood ah ee uu shaqada sii wadan doono.
Warku wuxuu kaloo intaas ku darayaa in ay jiraan xubno sare oo ka tirsan Madaxtooyadda DFS oo uu ugu horeeyo Agaasimaha Madaxtooyadda Fahad Yaasiin in ay ka qayb qaateen fududeynta hawlaha lagu dhoofinayo dhalinyaradda Soomaaliyeed.
Radio Daljir ayaa maanta waraystay nin lagu magacaabo Xasan Faarax Nuur oo aabaha dhalay wiil ka mid noqday ciidamadda dalka Qadar oo xiligan uu sheegay in uu ku sugan yahay xuduuda u dhexeysa dalka Qadar iyo Sacuudi Carabiya.
Wuxuu kaloo odaygaasi sheegay in wax iska bedeleen heshiiskii lacagta ee ay dhalinyaradu ku baxeen loona sheegay lacag aad uga hooseysa midii ay filayeen.